भीपीएन के हो? के का लागि प्रयोग हुन्छ? - Technology Khabar
» भीपीएन के हो? के का लागि प्रयोग हुन्छ?
भीपीएनको पूरा रुप भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो। यसको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि प्रयोगकर्ताले इन्टरनेटका माध्यमबाट कुराकानी वा सञ्चार गर्दा सुरक्षा र गोपनीयता प्रदान गर्नु हो।
इन्टरनेटमा जोडिनु आफैंमा असुरक्षित काम हो। इन्टरनेटको सुरुवातको डिजाइन भरपर्दो तरिकाले डाटा ट्रान्सफर गर्ने उद्देश्यले भएको थियो।
एउटा सामान्य उद्देश्यले सुरु गरिएको यो नेटवर्किङ यसरी देशव्यापी र विश्वव्यापी भएको धेरै भएको छैन। इन्टरनेटका माध्यमबाट सञ्चारका लागि प्रयोग हुने अधिकांश प्रोटोकलहरु सुरक्षित डाटाभन्दा पनि सामान्य हिसाबले पठाउन नसकिने डाटाहरु पठाउनका लागि बनाइएका हुन्छन्।
हामीले प्रयोग गर्ने इमेल, मेसेजिङ, फेसबुक लगायतका एप्लिकेशनहरु त्यही इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित भएर बनेका हुन्छन्। सुरक्षाका हिसाबले केही मानकहरु बनाइए पनि यस्ता सबै एप्लिकेशनहरु सुरक्षित हुँदैनन्।
यस्ता धेरै एप्लिकेशनले सुरक्षाका उपाय नअपनाइ नै सूचनाहरु यताबाट उता पुर्याइरहेका हुन्छन्। यसो हुँदा प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ह्याकर र इन्टरनेट ठगहरुका शिकार हुनसक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। यी ह्याकरहरुले मानिसहरुका बैंकिङ विवरण तथा क्रेडिट कार्ड डिटेल पनि चोरी गर्न सक्छन्।
यसबाहेक कुनै सरकारले आफ्ना नागरिकका गतिविधि र कुराकानी गोप्य तरिकाले थाहा पाउन चाहेमा वन अन्य इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले हाम्रा बारेमा थाहा पाउन चाहेमा पनि यस्ता प्रोटोकलको दुरुपयोग गर्न सक्छन्।
यस्तोमा भीपीएनको प्रयोगले मानिसहरुलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित राख्न मदत पुर्याउँछ। भीपीएनले ओपन इन्टरनेटभित्र एउटा व्यक्तिगत सुरुङ बनाउँछ। हामीले इन्टरनेटमार्फत् शेयर गर्ने हरेक गतिविधि इन्टरनेटको खुला बाटोबाट नगइ यही गोप्य सुरुङबाट जान्छ। यसरी जाँदा डाटाहरु ‘इन्क्रिप्ट’ भएर जान्छन्। इन्क्रिप्ट गरिएका विवरणहरु अरुले चोर्न गाह्रो हुन्छ।
भीपीएन इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र उसका गोप्य डाटाको सुरक्षाका लागि शक्तिशाली र महत्वपूर्ण भए पनि यसका केही सीमाहरु भने हुन्छन्।
भीपीएनले कसरी काम गर्छ?
भीपीएनले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नका लागि सामान्य इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ।
हामीले इन्टरनेटमा कुनै वेबसाइटको नाम राखेर इन्टर थिचेपछि हाम्रो कम्प्युटले केही प्याकेटहरु पठाउँछ। उक्त प्याकेटहरु थुप्रै राउटर स्विच तथा ल्यान हुँदै पब्लिक इन्टरनेटसम्म पुग्छ।
पब्लिक इन्टरनेटमा पुगेपछि ती प्याकेटहरु थुप्रै कम्प्युटर हुँदै अगाडि बढ्छन्। हामीले चाहेको वेबसाइटको डीएनएस नाम लाई आईपी एड्रेसमा बदल्न एउटा छुट्टै रिक्वेस्ट जान्छ। उक्त सूचना हाम्रो ब्राउजरमा फिर्ता आउँछ र त्यसले थुप्रै कम्प्युटर हुँदै पब्लिक इन्टरनेटमा पठाउँछ।
भीपीएनले तपाईको कम्प्युटर डिभाइस र डाटा सेन्टरबीच एउटा सुरक्षित र छुट्टै बाटो बनाउँछ। यसरी भीपीएनले हामीले पठाएको डाटा बीचमा रहेका विभिन्न ह्याकर वा तेस्रो पक्षबाट जोगाएर सिधै डाटा सेन्टरसम्म पुग्न मदत गर्छ।
भीपीएन सेवाले तपाईँको लोकल डिभाइसमा प्रयोग गर्न एउटा एप दिन्छ जसले तपाईँले पठाएका डाटालाई इन्क्रिप्ट गरेर भीपीएन सेवा प्रदायकको बाटोमार्फत् पठाउँछ। त्यसपछि भीपीएन सेवा प्रदायककोमा पुगेको डाटा फेरि डिक्रिप्ट गरेर डाटा सेन्टरसम्म पठाइन्छ।
शाओमी रेडमी के२० प्रोमा भ्यालेन्टाइन अफर, सिमित अवधिसम्म ४७ हजार रुपैयाँमा किन्न पाईने
पोकोको नयाँ स्मार्टफोन पोको सी३ लन्च, ५,००० एमएएचको ब्याट्री र निकै सस्तो बजार मूल्य